Kutsvaga shamwari dzokufambidzana nadzo | Kwayedza
Kutsvaga shamwari dzokufambidzana nadzo
13 Feb, 2015 - 09:02	 2015-02-16T15:19:51+00:00 2015-02-13T09:00:53+00:00 0 Views
MAKAITA basa nechirongwa chenyu veKwayedza chinobatsira chokwadi, vose vaifona pa0715 213 818 nepa0771 861 116 ngavachirega zvavo tatove nemusha. Mwari ngaakudzwe.
Ndiri murume ane makore 27, ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 24 zvichikwira. Ane rudo, anoshanda basa riri nani nekuti ini ndine garaji rangu diki rinotengesa mafuta ekufambisa motokari. Ane tunhu twake ngaandibate pa0775 193 145.
Makadii? Ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa nevana 2, ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora anotya Mwari akatendeka, ane rudo. Ndinoda ane makore 18 kusvika 26 ari HIV negative. Ini ndinoshanda saka iye ngaave anoshandawo. Ari pachokwadi ngaandibate panhamba idzi kana sms 0772 606 916.
Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 25. Ini ndine makore 32, nhamba dzangu idzi 0775 091 004.
Ndiri mukadzi ane 39 ekuberekwa nevana 2 uye murume wangu akafa. Ndiri kutsvaga murume ane makore 40 – 45. Ndine chirwere cheBP, anoda ngaandibate pa0778 460 985.
Ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvagawo mukomana ane makore 20-24 asina utachiona hweHIV. Anofarira kuenda kuchechi ngaandibate pa0782 029 060. Ndiri muMoslem.
lni ndiri mukomana ane makore 32, ndiri kutsvakawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore asingapfuure 30. Andifarira ngaandibate paWhatsApp chete panhamba dzinoti 0773 704 750.
Ndine makore 31, ndinodawo musikana ane makore 24 zvichidzika anokwanisa kuuya kuSouth Africa sezvo ndine nguva yakati ndisati ndaenda kuZimbabwe. Nhamba dzangu +27 613 400 323.
Veduwe ini wandinoda ndamushaya. Ndakati ndoda murume anoshanda muHurumende angave mupurisa, musoja, ticha kana chiremba ane mwana mumwe chete asiri mukobvu uye akatsvinda. Ini ndine makore, ndakazvarwa ndiri HIV+ uye handina mwana. Ndakagwinya, ada nezvangu ngaandibate pa0776 989 679.
Ndiri mudzimai ane mwana mumwe chete anove chirikadzi ine makore 42 asi ndine muviri mudiki zvekuti ukandiona makore angu haaenderane neni. Ndinotsvagawo murume ane mazirudo akafirwa seni, varume vevanhu kwete. Pautano ndiri HIV positive, basa ndinoshanda mumba. Nhare dzangu idzi 0783 872 365.
Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana 2. Ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi. Veduwe pandakabvira kunyora ndisingapindurwe ndibatsireiwo. Ndoda murume anonamata asinganwe doro zvese nekuputa fodya asina chirwere nekuti ini handina. VeKwayedza ndibatsireiwo, pandakabvirira kunyorera hapana ati andifonera kubva gore rakapera. Anondida anondibata pa0777 433 500.
Ndinotsvagawo murume ane makore 24 zvichidzika asati amboroora anoshanda. Ndiri musikana ane makore 20, akagwinya uye ndiri HlV positive. Anoda ngaandibate pa0782 419 491.
Ndiri murume anonamata ane makore 43, handina mwana, ndinoshanda uye handisati ndamboroora. Ndiri HIV negative, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18 – 35 wekuroora. Anoda anofona kana kutumira sms pa0779 182 381.
Ndiri mudzimai ane makore 35, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari HIV positive akafirwa. Ndibatei pa0715 760 828.
Ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 30-40. Ini ndine 26, handina zvangu mwana. Nhare dzangu 0775 719 145 asi macall back kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana mumwe, ndinoda murume ane makore 28-35 anoshanda uye anogeza. Ave kuda zvemba ndibatei pa0777 896 782 asi vari muchiuto kwete.
Makadini henyu? Ndinonzi Tawanda, ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana ane makore 26 zvichidzika. Ndinobatika pa0776 629 458.
Ndiri mukadzi ane makore 33 okuberekwa nevana vaviri uye ndinotsvaga murume akavimbika. Anondida ngaandibate pa0773 902 712.
Ndiri mukomana anoda shamwari yechisikana yakanaka inogeza inogara kumusha ine makore ari pasi pe20. Ngaafone pa0775 073 804.
Ndiri murume anonamata ane makore 43, handina mwana kana kumbobvira ndaroorwa. Ndiri HIV negative uye ndinoshanda. Ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 18 – 35 wekuroora. Anoda anondifonera kana kunditumira sms pa0779 182 381.
Ini ndiri mukadzi ane makore 26 nevana 2 ndiri kutsvagawo murume akavimbika. Ndiri HIV negative, nhare dzangu 0778 731 282
Makadini? Ndiri murume ane makore 26 akasiyana nemukadzi uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba ane makore 20 zvichidzika. Asina chirwere ndibatei pa0782 899 447.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume ane rudo ane vana 2. Anoshanda ngaandibate pa0771 665 016.
Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana 1 uye ndinoda mukomana kana murume chero asina mwana. Ari pachokwadi, ari HIV negative ngaandibate pa0774 992 827.
Ndiri kutsvakawo mudzimai akatendeka anoshanda, ndinogara kuKwekwe. Ndine makore 32 uye ndiri HIV negative. Nhamba dzangu 0716 464 631.
Ndiri mukomana ane makore 32, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 27, mushava akasimba zviri pakati nepakati uye ari munaku. Anoda zvemba chete ngaafone kana kutumira sms pa0783 624 828.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorerawo kuchirongwa chino asi hapana chati chaita. Ndiri murume ane makore 27 ndinoshanda uye ndinotsvagawo mudzimai ari pachokwadi anoda zvekuroorwa chero ane vana vaviri kana mumwe ane makore 25 zvichidzika kusvika pa18. Zita rangu ndinonzi Kidmore, andifarira ngaandibate pa0717 071 274 kana kutumira sms.
Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vatatu uye ndinotsvagawo murume anoda kuroora ane makore 45 zvichikwira. Ngaave anoziva Mwari zvekare anoshanda, ini ndinozvishandira. Vanoda nhare dzangu idzi 0771 359 254.
Ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana akanaka anoenda kuchechi uye anondida sezvandiri. Kana uriwe wandiri kutsvaga wakasununguka kundibata pa0775 544 394.
Ndiburitseiwo mubepanhau, ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 2 uye ndiri negative. Ndinoshanda, ndiri kutsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi. Anoda ndibate pa0775 748 129.
Ndiri mudzimai ane makore 22 nevana 2, ndinoshanda uye ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 25-32 anoshanda muHarare. Ngaave ari HIV negative anonamata, anoda anondibata pa0716 736 280.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo shamwari (penpals), kunyanya vachiri kuenda kuchikoro vasikana kana vakomana. Ndiri musikana ane makore 18, ndiri kuita A-level. Vanoda ngavandibate pa0777 264 436.
Ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 20, ini ndine 23 uye ndiri negative. Nhamba dzangu 0783 115 637.
Ndinotsvakawo murume ane makore 30 – 34 ane mwana 1, ndibatei pa0783 902 930.
Ndiri mukadzi ane makore 31, handina mwana uye ndiri HIV+. Ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi anoda zvekuvaka musha neni 0774 260 934.
Ndiri mukadzi ane makore 28, ndiri HlV positive uye ndinotsvagawo murume ari HIV positive ane makore 35 kusvika 65 asingaratidzike.
Ini handiratidzike, ndinodawo anoshanda asi ini handishande uye chikoro ndakaperera panzira. Anodhakwa neanofarira zvemafaro kwete pamwe neanonyepa. Ndinoda anoziva Mwari anokwanisa kuchengeta mhuri. Andidawo nhamba dzangu 0783 340 298 asi call me back kwete.
Makasimba here? Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 28. Ini ndine makore 31 uye ndinoda ari pachokwadi anoda zvemusha, ndapota akavimbika ngaandibate pa0772 542 208.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 25 ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0779 594 984.